स्वास्थ्य पेज » के गुलियो खानेकुराले मधुमेह हुन्छ ? के गुलियो खानेकुराले मधुमेह हुन्छ ? – स्वास्थ्य पेज
चिनीजन्य खानेकुरा सेवन नगर्दा मधुमेह लाग्दैन भन्ने जमात पनि कम छैन । जबकी मधुमेहको कारण चिनीजन्य खानेकुरा मात्र होइन ।मधुमेह हुनुमा वंशानुगत र अन्य कारण बढी जिम्मेवार हुन्छ । यद्यपी मधुमेहले ग्रस्त भइसकेपछिको अवस्थामा गुलियो खानेकुरा सेवन गर्दा सुगर अनियन्त्रित हुन्छ ।